Xinhua Myanmar - အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ လာရောက်သူများအား ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းမဟုတ်ဟု ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြော
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဩစတြေးလျ ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘင်ဂလောမြို့ရထားဘူတာရုံ၌ ခရီးသွားများအား ဧပြီ ၂၀ ရက်ကတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Asia
၎င်းက “ အထူးသဖြင့် Howard Springs ဒေသအပါအဝင် နိုင်ငံထဲက ပြည်နယ်တွေနဲ့ နယ်မြေဒေသတွေမှာ ကျန်းမာရေးစနစ်အပေါ် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာခြင်းဟာ သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ” ဟု သတင်းသမားများအား တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဆေးမှူးချုပ်ရဲ့အကြံပြုချက်အပေါ် အခြေခံပြီး ဇီဝလုံခြုံရေးအက်ဥပဒေအောက်မှာ ပြန်လာသူတွေကို ယာယီပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်အတွင်း နေထိုင်ခဲ့ပြီး မည်သူမဆို ဩစတြေးလျနိုင်ငံထဲသို့ ဝင်ရောက်လာပါက ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် နှင့် ကြီးလေးသော ငွေဒဏ်များကိုချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဩစတြေးလျအစိုးရက စနေနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ယင်း ယာယီပိတ်ပင်တားမြစ်မှု အမိန့်သည် ယနေ့ မေ ၃ ရက်တွင် စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆေးမှူးချုပ်၏ အကြံပြုချက်အရ အစိုးရအနေဖြင့် လာမည့် မေ ၁၅ ရက်တွင် သုံးသပ်မှု ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းမှာ လူမျိုးရေးအရ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်နေမလားဆိုသည့် မေးမြန်းချက်အပေါ် Payne က “ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မျှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ အစိုးရအနေဖြင့် ခရီးသွားပိတ်ပင်တားမြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေကြောင်းအရ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထံမှ ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် Payne ၏ မှတ်ချက်စကားထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကင်ဘာရာတက္ကသိုလ် စီးပွားရေးဌာနမှ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Kim Rubenstein က အကယ်၍ ကနဦးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် မေ ၁၅ ရက် နောက်ပိုင်းတွင် ခရီးသွားပိတ်ပင်မှု ဆက်လက်ထားရှိနေမည်ဆိုပါက အစိုးရ နှင့် ဥပဒေကြောင်းတွင် ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။(Xinhua)
CANBERRA, May3(Xinhua) -- Australian Foreign Minister Marise Payne has denied suggestions that the government's decision to ban travel from India was motivated by racism.
Payne said recently that the "temporary" move to ban travel from India to Australia was made in response to the high number of COVID-19 infections among Australians in hotel quarantine who have returned from the country.
"The burden that has placed on the health systems in the states and territories, including through particularly Howard Springs, isavery significant one," she told reporters on Sunday.
"The decision which has been made under the biosecurity act on the basis of the advice of the Chief Medical Officer isatemporary pause on returns."
On Saturday the government announced that anyone who enters Australia and has been in India within 14 days of the person's time of departure may face up to five years' imprisonment and heavy fines.
Asked if the radical move was motivated by racism, Payne said "absolutely not in any way."
Payne's comments came asaleading citizenship expert warned that the government could facealegal challenge to the travel ban.
Kim Rubenstein from the University of Canberra's Faculty of Business, Government and Law said that if the ban goes beyond the initial expiry date of May 15,achallenge would be more likely. Enditem
People are seen at the Bangalore City Railway Station during coronavirus pandemic in Bangalore, India, April 20, 2021.
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွေ့အကြုံကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက လေ့လာသင်ယူနိုင်ကြောင်း ဖော့စီပြောကြား
Next Article အီရန် နျူကလီးယားအရေး ညှိနှိုင်းမှု အသစ်တစ်ကြိမ် ဗီယင်နာတွင် ဆက်လက်ကျင်းပ